Myanmar to bring back its citizens stuck in six countries | Myanmar Business Today
HomeBusinessLocalMyanmar to bring back its citizens stuck in six countries
နိုင်ငံ ၆ နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို Relief Flight ခရီးစဉ်များဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ယူမည်
ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့တွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Relief Flight ခရီးစဉ်များ ပြေးဆွဲ၍ ပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကို မေလအတွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်ခေါ်ယူမည့်ရက်အတိအကျနှင့် လေယာဉ်ပျံသန်းမည့် ခရီးစဉ်အခေါက်ရေကို သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးများနှင့် ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ကာ မကြာမီအချိန်အတွင်း ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူ၊ ဂျပန်နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပိတ်မိနေကာ နေရပ်ပြန်လိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဧပြီလ ၂၈ရက်နောက်ဆုံးထား၍ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးသို့ အကြောင်းကြားထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို မေလအတွင်းခေါ်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကို မေလ ပထမအပတ်တွင် တိုကျိုမြို့မှ All Nepon Airways လေကြောင်းလိုင်းခရီးစဉ် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုမူ အပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် မေလ ၃၊ ၅၊ ၈၊ ၁၅၊ ၂၈၊ ၂၉ ရက်တို့တွင် ပျံသန်းနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံမှ စင်ကာပူသို့ လာရောက်ခေါ်ဆောင်မည့် လမ်းကြောင်းခရီးစရိတ်ကို အကုန်ကျခံ၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အပြန်လမ်းကြောင်း ခရီးစရိတ်(တစ်ကြောင်းစာ)အတွက်ကို လိုက်ပါမည့် ခရီးသည်များမှ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ဖော်ပြပါရှိသည်။
ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြည့် ကုသမှုပေးခြင်းအတွက် ၂၁ရက်နှင့် မိမိအိမ်တွင် သီးခြားနေထိုင်စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် ၇ရက် စုစုပေါင်း ၂၈ရက်ကို မဖြစ်မနေ တိကျစွာလိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Myanmar will bring back its citizens stranded in Japan, South Korea, Singapore, Thailand, India and China by flying relief flights, according to the Department of Civil Aviation.
The government will bring back all the citizens in May and announce the flight schedule after negotiating with the embassies.
Citizens, who are stranded in Singapore, Japan and South Korea and want to come back, must provide essential information to the embassies by April 28.
Myanmar citizens in Japan will be flown back in the first week of May by All Nepon Airways and those in South Korea on May 3, 5, 8, 15, 28 and 29 by international airlines.
Myanmar Embassy in Singapore has announced that those who want to come back will have to pay for one way flight ticket.
All of them, upon arrival, will be quarantined for 21 days in community quarantine centres and7days in home quarantine.
Previous articleCommodity distribution allowed to prevent price fluctuation
Next articleMTSH to give K200 dividends per share